Si firfircoon u Abuur ereyada muhiimka ah ee xayeysiinta | Martech Zone
Si firfircoon u Abuur ereyada muhiimka ah ee xayeysiinta
Axad, Sebtembar 23, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Inta akhriska Goobta John Chow, Waxaan ilaaway inaan iska diiwaan galiyay AuctionAds laakiin waligey runti ma gelin koodhka barta. Caawa waxaan kudaray koodhka qoraaladayda keli ah inta udhaxeysa qoraalka iyo qaybta faallooyinka. Waxaan rajeynayaa inaan arko sida ay wax u qabtaan.
AuctionAds waxay leedahay muuqaal fiican oo aad runtii ku qeexi karto ereyada muhiimka ah ee aad jeclaan lahayd inaad ku abuurto xayeysiis. Halkii aan ku ogaan lahaa qaar ka mid ah kuwa guud ee boggeyga, waxaan dhigay Ultimate Tag Warrior plugin in la isticmaalo (markale)!
AuctionAds waxay u baahan tahay inaad u qaabeysid ereyadaada muhiimka ah ee xayeysiiska xayeysiis-yar sida xadeynta. Natiijo ahaan, waxaad u baahan tahay inaad qaabeeysid qaab wax soo saarka Ultimate Tag Warrior code. Anigu waxaan diyaariyey tayda si aan u qoro calaamadda ugu horreysa ka dibna u dhigo nus-colon iyo meel u dhexeysa inta kale. Intaa waxaa sii dheer, waxaan cayimay ugu badnaan 3 keywords ugu badnaan in la soo bandhigo oo waxaan ku raacay 3 keywords keyword oo aan ogahay inay had iyo jeer soo bandhigi doonaan xayeysiin.
Bartilmaameedka Xayeysiiska ee nuxurka waa inuu keenaa sare u kac ku yimaada heerarka riix-ka ee xayeysiinta. Waxaan dhawaan ku tijaabiyay Google Adsense iyo Google Referrals mid ka mid ah barteyda bartilmaameedka ah Adsense-na wuxuu lahaa ilaa 8 jeer heerka gujiska. Ku habboonaanta xayeysiinta waa wax walba! Haddii aadan keenin xayeysiinta ku habboon, waxaad kaliya ka careysiineysaa akhristayaashaada ama way ku kori doonaan inay iska indhatiraan xayeysiinta. Cidina ma rabto taas!
Hal qoraal: Markaad dhab ahaan tijaabiso nambarka, ma soo celin kartid wax natiijo ah marka hore. Dadku waxay ku jiraan Xayeysiinta Xaraashka waxay sheegaan inay waqti qaadato in la dhiso natiijooyinkaas muhiimka ah. Ma hubo inta ay qaadaneyso. Weli waad ka heli kartaa dakhliga gudbinta ee ka baxa isku xirka Xayeysiiska, in kastoo!
Tags: xayeysiiska xaraashka
Suuqgeynta Farsamada ee Oxymoron
Haye Mike! Suuqgeyntu Sidoo Kale Waxay Ku Saabsan Yihiin